ငါ RentaCar Club အပေါ်မှာငါ့ကားကိုစာရင်းအားဖြင့်ဘယ်လောက်ငွေရှာနိုင်သလဲ
RentaCar Club သင်သည်သင်၏ကားကိုငှားရမ်းခြင်းမှဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်မည်မျှကန့်သတ်ရန်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ဝင်ငွေရရှိမှုတစ်ခုတည်းကိုသာသင့်ရဲ့အရောင်းစာရင်းကိုဘယ်လောက်ဆွဲဆောင်မှုအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏ကားထဲတွင်တစ်ဦးငှားရမ်းသူများစိတ်ဝင်စားမှုတိုးမြှင့်ဖို့နှင့်သင်၏ဝင်ငွေရရှိမှုတိုးမြှင့်ဖို့လုပျနိုငျသောအရာတို့ကိုအများကြီးရှိပါတယ်။
သင့်ကားများ၏ဆွဲဆောင်မှုက၎င်း၏စျေးနှုန်းပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါလိမ့်မယ်။ စျေးနှုန်းလက်လှမ်းနှင့်ကားရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများ (မော်ဒယ်တစ်နှစ်, တည်နေရာ, etc) နဲ့သဟဇာတဖြစ်ရပါမည်။ ငါတို့သည်သင်တို့သင်သည်သင်၏ကားကိုစာရင်းပြုစုတဲ့အခါမှာပူဇော်သောကြောင့်အကြံပြုထားသောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလိုက်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ ဒီစျေးနှုန်းအကြံပြုချက်အသုံးချဖို့သင့်ကားအပြိုင်အဆိုင်အဖြစ်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းအကြံပြုချက်ကိုတိကျခိုင်မာစွာစျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်အခြေခံသည်, သင်ပိုပြီးကြိုတင်စာရင်းသွင်းဆွဲဆောင်နှင့်သင့်ဝင်ငွေရရှိမှုတိုးမြှင့်ကူညီပေးပါမည်။
သင်စျေးနှုန်း၏ 80% ကိုစောင့်ရှောက်နေချိန်မှာသင့်ရဲ့ကားကိုမဘို့ရာခန့်ကြောင်းစုစုပေါင်းစျေးနှုန်း မှစ. RentaCar Club, သေးငယ်တဲ့ကြေးတစ်ဦးငှားရမ်းဖြစ်ပေါ်အခါတိုင်းစုဆောင်း။
အောက်ပါဇယားတစ်နေ့လျှင် 600 ဘတ်ဖြစ်သောတစ်ဦးငှားရမ်း၏ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းအပေါ် အခြေခံ. တွက်ချက်၏ဥပမာတစ်ခုပြသထားတယ်:
နေ့ရက်များတစ်လငှား ဝင်ငွေရရှိမှုတစ်လ ဝင်ငွေရရှိမှုတစ်နှစ်
2 (တစ်ဦးတနင်္ဂနွေ) 1,200 B 14,400 B